Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana : Samy olona tsy nanao pôlitika avokoa no milatsaka
Fifidianana : Samy olona tsy nanao pôlitika avokoa no milatsaka
Mbola ilaina ve ny antoko pôlitika eto Madagasikara? Mahagaga sy mahatalanjona ny zava-misy ankehitriny satria voalazan’ny lalam-pifidianana fa tsy maintsy olona atolotra antoko pôlitika ara-dalàna no mahazo milatsaka ho filoham-pirenena. Raha adika amin’ny fomba fijery mahitsy izany dia tokony ho olona mpikambana ao amin’ny antoko iray ka manaraka ny foto-kevitra izany antoko izany no olona hilatsaka ho kandidà.
Raha ny mahakasika ny antoko pôlitika indray no resahina dia antoko tsy misy manana foto-kevitra no misy eto Madagasikara ankehitriny ankoatr’ireo antoko izay efa tranainy toa ny Arema sy ny Monima ary ny Mfm. Tena antoko taratasy fotsiny no hita misy amin’izao fotoana izao, izay natao ho ara-dalàna amin’ny fanjakana fotsiny mba hahazoana mivorivory sy mikarama ary mitady vola fa indrindra handrombahana fanjakana hanodinkodinana ny harem-pirenena sy hanjakazakana amin’ny fahefana. Sady tsy an-kavia no tsy an-kavanana izy ireny ary tsy kapitalista no tsy sosialista koa. Tsy antokom-pivavahana na nentin-drazana, fa dia antoko pôlitika mandehandeha ho azy eo. Ny vahoaka koa azo rebirebena satria mahantra sy fetsifetsy no toa mahazo olona.
Ny tena mahatalanjona dia ny fomba fijerin’ny olona sasany azy fa saingy mitsara ny fanaovana pôlitika amin’ny alalan’ny hatsaran-tarehy sy bika fotsiny. Tsy vitan’izany fa mijery ny harenany sy ny vola ampiasany koa, ka tsy miraharaha na vola maloto na nangalarina na koa vola sandoka ary mifono fivarotana tanindrazana no entina hibaboana ny vahoaka. Izany no zava-misy ankehitriny.
Raha jerena ireo olona rehetra milatsaka ho fidiana ankehitriny dia olona tsy nisy niofana hitondra firenena akory. Manao andrankandrana avokoa. Ary ny tena mahagaga dia izy ireny no mahasarika ny olona ankehitriny.
Ny tena olana koa ny tsy fananan’ny antoko pôlitika olona hatolotra hofidiana. Mahatratra hatrany amin’ny 100 ny antoko pôlitika misy amin’izao fotoana izao ao amin’ny ministeran’ny Atitany.Teo aloha teo aza dia efa nahatratra 400 ny antoko pôlitika teto Madagasikara. Izy rehetra ireo nefa tsy manana olona afaka hisahana ny asan’ny filoham-pirenena velively. Izany no olana lehibe eto amin’ny firenena ankehitriny. Ny fikambanana tsy miankina no be ao amin’ny Antenimierampirenena ao izay tsy miraharaha firenena fa mieritreritra ny ho any am-paosiny ihany. Ireo izay ao amin’ny antoko koa dia tsy azo antoka fa mora miovaova loko sy mamadika palitao ka manenjika malety sy
vola fotsiny. Ny ao amin’nyAntenimieram-pirenena indray dia mpandraharaha avokoa no manao pôlitika ka lasa nivaona tanteraka ny fanaovana pôlitika.
Mbola ilaina ve ny antoko pôlitika eto Madagasikara?